Brezila: Adihevitra manodidina ny boky ho an’ny ankizy manavakava-bolonkoditra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Marsa 2011 4:45 GMT
Vakio amin'ny teny Português, polski, Español, Italiano, 繁體中文, 简体中文, English
Eo am-pamakiana ity lahatsoratra ity, maninona moa raha mba mihaino ihany koa ny hira Yellow Woodpecker's Ranch (Sítio do Pica-Pau Amarelo) [pt], feonkira mahazatran'ny tantara mitohy amin'ny fahitalavitra Breziliana nalaina tamina bokin'ny ankizy nosoratan'i Monteiro Lobato.
Hira noforonin'i Gilberto Gil, azo henoina ao amin'ny tranonkalan'ny mpanakanto. Tsindrio eto handefasana ny raki-kira amin'ny varavarankely hafa.
Volana vitsivitsy izay, niady hevitra momba ny haisoratra, ny sivana, ny fanavakavaham-bolonkoditra ary ny fampianarana ny valan-tserasera Breziliana, arahin'ny soso-kevitra avy amin'ny Vaomieram-pirenena momba ny fampianarana mba hanalana ny bokin'ny mpanoratra malaza Monteiro Lobato Caçadas de Pedrinho (Mandeha mihaza i Petera) [pt] tsy ho ampiasaina eny an-tsekoly.
Natao horonantsary mihetsika mitohy amin'ny fahitalavitra ny Caçadas de Pedrinho an'i Lobato nandritra ny taompolo 1980 izay mbola mandeha amin'ny firenena miteny Portigey amin'izao fotoana izao. Tany amin'ny faramparan'ny taona 1990, noraisina ho fitaovam-pampianarana any an-tsekoly manerana an'i Brezila izy, ary isan'ny fandaharam-pampianaran'ny governemanta ihany koa izany ny mizara ny boky eny amin'ny sekolim-panjakana.
Na izany aza, taty amin'ny faraparan'ny taona 2010, dia nametraka taratasy fitarainana mikasika ny boky ny olom-pirenena iray milaza fa tsy mifanaraka amin'ny tondrozotram-pampianarana [pt] avy amin'ny Vaomieram-pirenena ny boky indrindra eo amin'ny “fahabangan'ny fitsarana mialoha, ny fomba fitenenana mahazatra na ny fanisihana miverimberina”, ao anatin'ny mason-tsivana ihany koa no ahitana ny “kalitaon'ny lahatsoratra, ny lohahevitra, ny kalitaon'ny sary ary ny lanjan'ny vakinteny aminy, raha jerena hoe iza ny mpamaky kinendry”. Manazava i Sergio Leo :
(…) Namakafaka ny fitarainana ny manampahaizana avy amin'ny Minisiteran'ny Fampianarana ary nanaiky fa maneho singa fanavakavaham-bolonkoditra ilay boky tantara ary nanao fehinteny fa noho izany zavatra izany, dia tsy tokony ho isan'ny boky zaraina intsony io, raha tsy hoe angaha ka manome karazana torolalana ho an'ny mpampianatra sy ho an'ny tanora mpamaky azy, misy ny fitantarana ny taona 1933 izay mbola nisinisy kokoa ny fanavakavaham-bolon-koditra tany Brezila ary tsy tokony ho raisina ho toetra fanao andavanandro ny fihoarana manokana nataon'i Lobato amin'ny olona mainty hoditra.
Avy any amin'ny lafivalo ihany koa ny fanoherana izany fanesorana ny boky izany. Nitsipaka [pt] ny hetsika ny manam-pahaizana Akademisiana Breziliana momba ny Teny. Nanoritra ny tranga ho ” fanivanana ara-pedagojika” i Jarbas, avy ao amin'ny bilaogy Boteco Escola (Sekolim-panjakana) [pt] .
Nilaza ny bilaogy Música Pura (Mozika ranoray) [pt] fa lova ny literatiora ka tsy azo ampifanarahana amin'ny fivoaram-pisainana. Mafy ny fanakianan'i [pt] Aldo Rebelo avy ao amin'ny Antoko Komonista raha misy ny karazana veto ampiharina amin'ny Caçadas de Pedrinho amin'ny fametrahana ny “Fitsaran'ny haisoratra any Brezila”.
Valdeci, avy eo amin'ny bilaogy Mais de 140 caracteres (marika mihoatra ny 140 ) [pt], no niantso fanohanana tsy amin'i Lobato ihany fa amin'ny mpanoratra rehetra izay nahasahy nihaika ny mahay mitondra tena ara-politika (politiquement correct):
Avelao hizaka ny zony manafika ny mpanonta pirinty manerana izao tontolo izao ny Vaomieram-pirenena momba ny Fanabeazana, toy ny hoe izy irery ihany no tokana mpiambina ny marina, mitdy hanova ny fitantaran'i Monteiro Lobato, Machado de Assis, Castro Alves ary ireo mpanoratra hafa maro izay “nahasahy” nanoratra amin-kahalalahana ny tantarany afaka amin'ny fihatsarambelatsihin'ny fahaiza-mitondra tena ara-politika (petrakevitra tsy mbola nisy akory tamin'ny androny)…
Sarin-i Monteiro Lobato, nanodidina ny 1920. Sary amin'ny tranom-panjakana.
I Monteiro Lobato no atidoha tompon'andraikitra voalohany ny boky hanalana voly ny ankizy tamin'ireo taranaka Breziliana maro nifandimby. Noheverina ho maherifon'ny firenena, tena nanana anjara be tokoa izy tamin'ny lova ara-kolotsain'ny firenena.
Maurício de Souza mpamorona ny boky tantara an-tsary Turma da Mônica (Ny tarik'i Monica) dia nakan'i Silvana Nunes ao amin'ny Meu caderno de poesias (Ny kahien'ny tononkaloko) [pt] hevitra tamin'ny fanohanana amin-kafanam-po ny asa soratr'i Lobato:
(…) Na izany aza dia niady tamin'ny fihemorana aza izy, ka nanan-kevitra mandrakariva sy nanoratra boky maromaro ho an'ny ankizy. Ny tsara indrindra nandritra ny fotoana rehetra.
Na izany aza, hitan'i César Baldi tanisain'ny BloQ [pt] ho voafetra amin'ny resaka fanavakavahana nandritra ny fotoana nanoratana ny boky (fehin-kevitra ampiasaina hiarovana an'i Lobato) dia fandavana ny endrika fanavakavahana mihatra hatrany amin'ny mainty hoditra.
Ny tranon'ny Yellow Woodpecker Ranch ao amin'ny horonantsarin'ny fahitalavitra Globo nalaina tamin'ny bokin'ny ankizy nosoratan' Monteiro Lobato'. Sary nahazoana alalana tamin'ny gazety boky Obvious.
Nanontany ny mason-tsivana ilain'ny Vaomieran'ny Fanabeazam-pirenena sy ny Sekreterra manokana i Terezinha Pereira avy ao amin'ny bilaogy Alma Carioca (fanahin'ny Carioca) [pt] amin'ny fandalinana ny fitarainana:
Mety tsy nalaindry zareo an-tsaina akory fa mety tsy hitovy amin'izay eritreretin'ny mpanoratra ny eritreretiny amin'izay lazain'ny olona noforonina anaty tantara “manana ny fomba fiteniny manokana” . Ary raha mitovy moa izany? Tsy teboka tsara ve izany hisian'ny adihevitra ao an-tsekoly?
Manome fomba fijery ara-pampianarana mikasika ny resaka i Idelber Avelar, avy ao amin'ny bilaogy O biscoito fino e a massa (Ny biskoy sy ny vahoaka ) [pt]:
Ilaina ny mahafantatra ny tontolo manodidina mba hametrahana ny fomba fiteny, ny fihetsika manilakilaka, ny fomba mampivandravandra ny volonkoditra, ny fankahalana olona na fankahalana noho ny fironana fitiavana (hafahafa) sy ny hafa koa voasoratra na hita ao anaty tantara ho nekena na notsipahin(ny fiarahamonina) nandritra ny nanoratana azy ny boky(…) vakiana amim-pahaizana amom-pahamailoana ny tantara fa tsy hoe ho modelin'ny mpianatra. Tsy mora jerena izany tsy akory. Raha ny momba ny an'i Lobato dia vao maika sarotra ny raharaha.
Ho an'i Sergio Leo [pt] dia mbola tsy namaky ny bokin'i Lobato ny ankamaroan'ireo mpandalina avy ao amin'ny Vaomieran'ny Fanabeazam-pirenena, fa nahalala ny asany tamin'ny alalan'ny fanamboaran'ny fahitalavitra azy izay efa tsy misy “fanavakavahana sy zavatra hafa” intsony.
I Alberto Mussa, lazain'i Rafael Rodrigues ao amin'ny Entretantos (Na izany aza) [pt], kosa dia mino fa fotoana izao hanalana ny hevitra hoe tsy misy any Brezila mihitsy na ny fanavakahana na ny fitsaratsarana olona mialoha. Miandry ny horesen-dahatra moa izy ao amin'ny lahatsoratra fototra nosoratany ao amin'ny gazetin'ny haisoratra:
Reseo lahatra aho fa ny ankizy mainty hoditra, raha mamaky ny fehezan-teny manavakava-bolo-koditra ao amin'ny bokin'ilay malaza Lobato, ka tsy hahatsiaro voaratra, voaavakavaka, voakorontana. Reseo lahatra aho fa ny boky toy itony dia tsy manimbazimba ny zo fenon'ny ankizy ara-moraly sy ara-batana – izay araka ny lalàna – dia mila arovana.
Maneho fahasamihafana mazava eo amin'ny vaovaon'ny haino aman-jery mahazatra sy ny an'ny tontolon'ny bilaogy ny adihevitra eo amin'ny raharaha Monteiro Lobato. Ny iray voalohany mahazo vahana amin'ny fepetran'ny fanakanana, mametraka fandaharam-potoana izay voizin'ny resaka diso amin'ny tranga sasany.
Ny tontolon'ny bilaogy kosa etsy andanin'izany miditra lalina kokoa amin'ny resaka ary maneho karazana fomba fijery maro, manohana sy manohitra, izay tsy mety loatra ho an'ny ankamaroan'ny mpamaky na mpijery ny haino aman-jery .
Lahatsoratra nadika tamin'ny teny Anglisy nataon'i Emma Brewin.
Soratra miverina: Lobato: debate mundo afora « Boteco Escola
[…] Brezila: Adihevitra manodidina ny boky ho an’ny ankizy manavakava-bolonkoditra. […]
30 Marsa 2011, 20:55